Arrimaha Bulshada | Radio Himilo
Sidee cunug yar ku helay Duullimaad bilaasha nolashiisa oo dhan?
Sadia Nour Yesterday at 1:15 pm
Himilo – Diyaarad ayaa isaga kala socdaaleysay dalalka Sacuudi Carabiya iyo India, markii haweeneey ka mid ahayd rakaabka uu xanuun kadis ah qabtay. Duullimaadka oo ku wajahnaa magaalada Kochi ee ku taala koofurta India, ayaa waxaa lagu qasbanaaday in loo ...
3-jir laga badbaadiyay Aabiteey
Himilo – Waxa ay ka mid ahayd dad u dabaal-degayay munaasibadda maalinta Aabiteeyda wadanka Tiawan,xuskaasi oo sanadkiiba soo jiita kumanaan ruux. Lin,ayaa si kadis ah u qabatay xarigga aabiteydan oo xajmi ahaan wayn,iyada oo durbadiiba hawada la gashay. Daawadayaal argagaxsan ...
Dib u xusuuso sheekada Gabadha fuusha Buuraha
Himilo – Waxey dhawaan gashay buugga lagu keydiyo sheekooyinka cajiibka ah ee GUINNESS kadib markii mudo ka yar laba sano ay ku gaartay barta ugu sareysa sedaxda buur ee ugu dheer caalamka. Álvarez Chávez, ayaa safarkeeda ka billaawday buurta caalamka ...
Himilo – Dunida marna mayeelan maalin la wada ladan yahay: mana yeelan maalin la wada dhibtoon yahay. Hayeeshe maalinna way kasii naruuro fiican tahay maalin kale. marka aynu leenahay saaxiibo rumaad, dharaar walba waxay leedahay milgo. Waxaa jira maalmo dhaama ...
Himilo – Dagane ku nool New York, Andre McDonnell wuxuu waqtigiisa nasiinada badi ku qaataa u qeybinta kabo dadka darbi-jiifta ah. Helidda ururkiisa samafalka ee loo yaqaan ‘Its From the Sole,’ deeqsiga 42-jirka ah wuxuu qeybiyay in ka badan 5,000 ...
Himilo – Mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan balse si liidata looga fahmay xerada cilmiga kasmo-nafeedka waa doorka saaxiibadu ku leeyihiin nolosheenna. Wax iska caadi ayay u muuqataa inaan si qoto dheer loo qaadaa-dhigin ahmiyadda saaxiibadu noogu fadhiyaan. Dhinac kasta ...
Lakulan – Ninka reer Thailand ee guursaday 120 xaas
Mahad Mohamed August 8, 2020
Himilo – Godadlenimada waa sharci-darro gudaha dalka Thailand, hayeeshe taasi kama joogsan Casanova inuu 120 xaasas guursaday, dhalayna 28 carruur. Waxa qeyrul-caadiga ah waa in dhammaan xaasasku ay is wada garanayaan. Tambon Praset, guddoomiyaha degmada Phromee, gobalka Nakorn Nayok – ...
Himilo – Waxaynu dib u sheegi karna gafaf muuqda oo badan oo aan waalidkeen ka galnay kolkii aynu caruurta aheyn. Siyaalaha qaar, gafafka way kaaga xusuus badan yihiin wax-qabadka dhowrsiga ah ee waalidku aanu noo qaban. In-kasta oo, ka waalid ...